နှစ်ကူးအလှူ ခြစ်ဦးယူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » နှစ်ကူးအလှူ ခြစ်ဦးယူ
ဒီလိုဗျာ.. .. လာမည့် နှစ်သစ်ကူး အရင်တုံးက လုပ်သလို စုပေါင်းရွာအလှူ ပြုချင်တယ်။ အဲဒါ ဒီဇင်ဘာလကုန် သို့မဟုတ် ဇန်နဝါရီလဆန်း မှန်းတယ်။ အလှူက ပဲခူး အင်းတကော်မှာ ရှိတဲ့ ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး (ခ) ဒေါ်ကုသလစာရီကျောင်း လိုရာသုံးဖို့ပါ။ ဆရာမက လူသိထင်ရှား ကြော်ငြာကောက်ခံတာ တားမြစ်တာမို့ ကိုယ်ချင်းကိုယ်ခြင်းပဲ ကောက်ပါမည်။ အယင်က ပတ်ဘလစ်ဖွင့်လဲ ရွာထဲကလူပဲ အများဆုံးလှူတာပါ။ ရှင်းအောင်ထပ်ပြောရလ ျင် ယခု အလှူကောက်တာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ပါ။ ဆရာမ ဝေနေယျအချို့ကို အသိပေးတာကလွဲလို့ ခွင့်ပြုချက် မယူထားပါဘူး။ ရငွေကို သဘာဝတရားရိပ်သာ အကောင့်ထဲသွင်း ဒါမှမဟုတ် ရွာသူအန်တီဝေါင်း ဘဏ်အကောင့်ထဲ လက်ခံဖို့ ကြံထားပါတယ်။ သဘာဝ ရိပ်သာ အကောင့်ထဲ ထည့်လျင် ပိုရှင်းတာမို့ အဲဒီထဲထည့်နိုင်လျင် ထည့်ပါ။ ဖဘမှာလဲ တင်ပါမည်၊ လှူမည့်ငွေ ပမာဏနဲ့ လှူပြီးရင် ဘယ်နေ့ ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်ကို ဒီမှာ၊ ဖဘမှာ မန့်ပေးပါ။ လှူသူနာမည်များ စုပေါင်းပြီး ပို့စ် အပ်ဒိတ်လုပ်မည်။ လူညီလျင် ရွာလူဂျီးမျာ; ဦးဆောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ သွားလှူနိုင်ကြတာပေါ့။
အနော်ေကြာင်ကြီး ကိုယ်တိုင် မလှူနိုင်ပေမဲ့ စပွန်ဆာ ရှာထားပါသည်။ ပထမလှူသူ၁ဝဦး လှူငွေ (သို့မဟုတ်) ကျပ်၂၅သိန်းကို ၁၀၀% ထပ်ဆောင်းပေးမှာမို့ တကျပ်လှူတိုင်း နှစ်ကျပ်ဖြစ် ကိုယ့်အလှူ အဆပွားပါမည်။ လောလောဆယ် ပေးထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့်သာ အတည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ လှူသူများ ရှိလျင် နေရာဒေသလိုက်ရွေ့ ရွာသူားများထံမှ အကူအညီတောင်းပါမည်။ ငွေလွှဲရာတွင် Memo ၌ ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး (ခ) ဒေါ်ကုသလစာရီ အတွက်ဟု ကိုယ့်နာမည် နှင့် မြန်မာဂေဇက် အမှတ်အသား ပြုပေးပါရန် နိဗာန်အကျိုးမေ ျှာ် နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ ။။။။။ ဒူဝေ ဝေ ဝေ ….. ……….
သဘာဝအကောင့် မဟုတ်တော့ပါ၊ ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး ကပ်ပိယအကောင့်သို့ တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ။
(ဓါတ်ပုံ မနှစ်က ဆောက်လက်စ ဓမာရုံပါ၊ ယခု ပြီးသွားလောက်ပြီ)
အလှူရှင်စာရင်း – ၁လ ၄ရက် ၂၀၁၈
၁။ ကောင်းကင်ပြာ – ၃၀,၀၀ဝ x ၂ = ၆၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ (ငွေလက်ခံ ၃၀,၀၀ဝ AYA သဘာဝ – ၁၂လ ၂၆ရက် ၂၀၁၇)
၂။ Wei Wei (ခ) ဧတီဝမ် – ၁၀၀,၀၀ဝ x ၂ = ၂,၀၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ (ငွေလက်ခံ ၁၀၀,၀၀ဝ CB ဝေါင်း – ၁လ ၂ရက် ၂၀၁၈)
၃။ Ma Ma (ခ) မားမား – ၃၀,၀၀ဝ x ၂ = ၆၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ (ငွေလက်ခံ ၃၀,၀၀ဝ KBZ သဘာဝ – ၁၂လ ၂ဝရက် ၂၀၁၇)
၄။ အမည်မဖေါ်လိုတူ ရွှေမန်းဓါးလေးတဦး – ၅၀၀၀ဝ x ၂ = ၁,၀၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
(ငွေလက်ခံ ၅၀,၀၀ဝ AYA ဝေါင်း – ၁၂လ ၂ဝရက် ၂၀၁ရ ။ ဝေါင်းမှ သဘာဝ AYA သို့ ၁လ ၂ရက် ၂၀၁၈ တွင်လွှဲပြီး)
၅။ အမ်တီဧ (ခ) Aye.KK- ၁၀,၀၀ဝ x ၂ = ၂၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
၆။ E Tone (ခ) Aung Kyaw Kyaw Oo – ၅၀,၀၀ဝ x ၂ = ၁၀၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
၇။ မွသဲ (ခ) Aqua Thel – ၃၀,၀၀ဝ x ၂ = ၆၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
၈။ ခင်ဇော် (ခ) ဇီဇီဇင်ဇော် – ၂၀,၀၀ဝ x ၂ = ၄၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
၉။ ကိုဇင်မောင် + မမွန်မွန် – ၂၀,၀၀ဝ x ၂ = ၄၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ
( အမှတ်စဉ် ၇။ ၈။ ၉ စုစုပေါင်း ငွေလက်ခံ ၇၀,၀၀ဝ ကျပ်တိတိ AYA ဝေါင်း – ၁လ ၃ရက် ၂၀၁၈ ။ ဝေါင်းမှ သဘာဝ AYA သို့ လွှဲရန်)
ကြိုဆိုပါတယ် ခြစ်သ ျှား။ ပေးထားတဲ့ အကောင့်တခုခုထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ လွှဲတဲ့အခါ ဆရာလေး ကုသလစာရီ (ခ) မချစ်မြတ်နိုး အတွက်… မှ ခြစ်သ ျှား (မန်းဂဇက်လို့ ဖေါ်ပြပေးပါ) ဒါမှမဟုတ် မဝေါင်း အကောင့်ထဲ လွှဲပြီး ဘယ်လောက် ဘယ်နေ့ ဘယ်ဘဏ်ဆိုတာ ဒီမှာဖြစ်ဖြစ် ဖဘဂဇက်မှာဖစ်ဖစ် မန့်ပေးပါ။ မွ မွ <3
ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး အင်းတကော်ကျောင်းရဲ့ ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံများနဲ့ ဆရာမအတွက် တပါးဆောင် ဆောက်လုပ်ဆဲ ဓါတ်ပုံများ ရထားပါပြီ။ နောက်ပို့စ်တခုအနေနဲ့ တင်ပါဦးမည်။
ဒီချုပ်- အပီ ဟုတ်သွားမယ့် အလှူမျိုးလည်း လုပ်စေချင်ဘာထယ်
၃၀၀၀ဝ လှူပါမယ်…။ ငွေလွှဲပြီးရင် ဒီမှာလာပြောပါ့မယ်…။ ပိုစ့်ကို အပေါ်ကပ်ပေးပါ…အူးအူးကြောင်..
ဆပြန်တိုး ၃၀၀၀ဝ ထပ်ပေါင်းတာမို့ ခြစ်ကင်းကောင်အလှူ ၆၀၀၀ဝကျပ်တိတိ ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ…။ ကြံသူများလဲ မလှူလက်ရ မရှိလေအောင် အမြန်ဆုံးနည်းနတ် ပန်းကန်လုံးစီး ကြွရောက်တော်မူဂျပါလို့စ်…. မွ မွ
နာ့ ကျ အသိမပေးဘူး
လူမိုက်ခင်ဇော် သံသလ ျှာတရှောက်လုံး မိုက်လာခဲ့ပီးပီ၊ ဒီတချီတော့ လိင်မာလက်ပါ… မွ မွ… တူတူခြစ်ရအောင်
သဘာဝရိပ်သာ USA ရှိနေတယ်နော ကကြောင်…။
အဲဒီမှာ.. အပေါ်တက်လမ်းတာင်တကြောကို..လမ်းဘေးမှာ.. ရိပ်သာလေးတွေစီပြီးဆောက်မှာမို့.. လုပ်အားလူလိုနေတယ်လို့..ဆရာတော်မိန့်ထားပါတယ်..။ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်စသဖြင့်..နိုင်ငံတခုကို.. ရိပ်သာတခုစီ ချပေးမယ်ဆိုတာပဲ..။
ဆိုတော့.. အခုလှူရင်.. လှူငွေ၂ဆဖြစ်မယ်မို့.. အလှူပါတော့ပါမယ်ဖြစ်ကြောင်း..။
ဘာသာရေးမို့.. စိတ်မပါပေမယ့်.. ကကြောင့်မျက်နှာနဲ့.. စတိတော့ ပါမယ်ဖြစ်ကြောင်း..။
သဂျီးလှူရင် ဖီဖီခေါ်မယ် <3